फूल जस्तो जीवन
फूलले कस्को मन छुदैन होला, फूलको नाम लिने साथ धेरैको मनमा आनन्द आउने गर्छ । त्यसैले त साहित्यमा फूललाई विशेष स्थान दिइने गरिन्छ । फूललाई सुन्दरता, आनन्द, प्रेम, शान्ति, आदिको प्रतिकको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । साहित्यमा मात्र नभएर हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि फूलको ठूलो महत्व छ । घर सजाउन, देवतालाई चढाउन, पूजाआजा गर्न, विशेष अवसरहरुमा बधाई दिन अनि प्रमी (प्रेमीकालाई उपहार दिन फूलको असाध्यै प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । विभिन्न किसिमा देवतालाई विभिन्न किसिमका फूल चढाइन्छ । त्यस्तै गरी पूजाको प्रकृति हेरी फूलको प्रयोग भएको पनि कतिपय ठाउँमा हामीले देखेकै छौ । विशेष गरी पाश्चात्य समाजमा, प्रमी -प्रेमीका होस् वा साथीभाई, आदान प्रदान गरिने फूलहरुमा गुलाफको फूलले विषेश महत्व राखेको हुन्छ । विभिन्न रंग र जातिका फूलले विभिन्न खाले संन्देशहरु दिइरहेको हुन्छ । उदाहरणको रातो गुलाफले “म तिमिलाई माया गर्छु” भन्ने सन्देश दिन्छ भने गुलावीले “तिमि राम्रो छौ”, सेतोले विदाई वा विछोडको संकेत दिएको हुन्छ भने पहेलो गुलाफले “म तिम्रो साथी बन्न चाहन्छु अथवा तिमि मेरो राम्रो साथी हौ” भन्ने संकेत गर्छ । यी विभिन्न रंग र जातिका फूलहरुको प्रयोग गरी फूलहरु प्रणय दिवसका दिन आदान प्रदान गरिएका कुराहरु प्रायः हामी सबैलाई थाहा छ । सूचनाले हामीलाई पाश्चात्य संस्कृतिमा प्रयोग हुने विम्ब र त्यसको अर्थका ’boutमा धेरै जानकारी दिएको छ ।
लिम्बू मुन्धुमको साथ साथै जनजीवनमा छएको अर्को एक महत्वपूर्ण फूल छ, जसलाई सिङ्जाङ्गो भनिन्छ । यो फूल पहाडि क्षेत्रमा पाइने एक प्रकारको वास्ना आउने रातो सुनाखरी (a kind of red sweet-smelling/fragrant/aromatic orchid) फूल हो । यो सुनाखरीले तरुनी-तन्नेरीको प्रतिकको रुपमा हेरीन्छ । यो सुनाखरीको राम्रो वासना आउने र हर्ेदा पनि राम्रो हुने हुनाले होला तरुनी -तन्नेरीले एक आपसमा आदान प्रदान गर्ने फूलको रुपमा पनि यसलाई मुन्धुममा वर्णन गरिएको छ । कक्फेवा फूङ अर्थात् चाँपको फूल (Magnolia/Michelia champaca) लाई लिम्बू जनजीवनमा नयाँ जोस, जाँगर र उमंगको रुपमा हेरीन्छ । यसरी चाँपको फूललाई नयाँ जोस, जाँगर र उमंगको रुपमा हेरीनुको अर्थ हो यसले दिने नयाँ वर्ष संकेत हो । चाँप फूल्नु भनेको लिम्बू गाँउले जनजीवनमा नयाँ वर्ष शुरु भएको संकेत हो, जसरी जापानमा साकुरा (आरु फूल) फुल्नुलाई नयाँ वर्ष आगमन भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले माघ महिनालाई कक्फेवा पनि भनिन्छ र कक्फेवा -चाँप) फूल फूल्नुले नयाँ वर्षको आगमन भएको बुझिन्छ ।
लिम्बू मुन्धुममा धेरै किसिमका फूलहरुको वर्णन पाइन्छ र ती वर्णनमा तिनिहरुको उत्पत्ति र महत्वको ’boutमा बताइएको छ । यो गहन खोजीको विषय हो । यो वनस्पती विज्ञान, वातावरण तथा सांस्कृतिको विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गर्नको लागि राम्रो तथा महत्वपूर्ण विषय हुनसक्छ । लिम्बू समुदायमा फूललाई जीवनसंग गाँसेर हेर्ने अनुष्ठान जसलाई फुङ्मा चामा भनिन्छ । यो अनुष्ठानले पनि लिम्बूहरुको जीवन फूल जस्तै छ भन्न झझल्को दिइनै रहन्छ ।
Author sirjanaPosted on सेप्टेम्बर 8, 2007 जनवरी 23, 2017 Categories गन्थन मन्थन, Limbu
7 thoughts on “फूल जस्तो जीवन”
सेप्टेम्बर 12, 2007 मा 9:46 बिहान
तपाईँको यो पोष्टिङ्गबाट सुन्दर लिम्बु संस्कृतिको ’boutमा केहि जान्ने अवसर मिल्यो। धन्यबाद छ, भविष्यमा पनि यस्तै पोष्टिङ्गहरु पड्न पाउने आशा छ।
सेप्टेम्बर 13, 2007 मा 8:58 अपराह्न
by the way, limbu culture ma vivah garda janti lai khoob dukha dinchhan re hoina behuli tira kaa keti haru le?
Nagendra Ingnam भन्नुहुन्छ:
सेप्टेम्बर 14, 2007 मा 9:46 अपराह्न
सेप्टेम्बर 18, 2007 मा 4:37 अपराह्न
ful ko akhaa ma fulae sansar…………..
सेप्टेम्बर 18, 2007 मा 5:10 अपराह्न
Ho, jiskine garchhan… teslai dukkha samjhanu hunna !!
nar limbu भन्नुहुन्छ:
सेप्टेम्बर 21, 2008 मा 2:23 अपराह्न
BISHNU RAI भन्नुहुन्छ:
मे 11, 2010 मा 2:28 अपराह्न
अघिल्लो Previous post: श्राप
अर्को Next post: माया बाड्ने श्रवण दाई